Itofotofo, icocekile kwaye ikufuphi kwinto yonke - I-Airbnb
Itofotofo, icocekile kwaye ikufuphi kwinto yonke
Indlu enamagumbi okulala ayi-2 aneegadi ezimbini ezikhuselekileyo/iindawo zokutyela, ikhitshi elikhulu nendawo yokutyela evulekileyo nendawo yokuhlala. Zonke izinto zebhedi, iitawuli, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela ziyafumaneka.
Kulula ukuhamba ngeenyawo ukuya elunxwemeni lolwandle, iikhefi kunye neevenkile kwiHitchcock Ave, ulwandle kunye neendawo zokudlala kumlambo iBarwon, ibala legalufu kwaye lihamba ngqo endleleni ukusuka kwisikolo sokuqala esine-ovals, ibala lokudlala kunye nelayibrari yasekuhlaleni.
Le ndlu inemigangatho yamaplanga kuyo yonke i-, iibhedi ezintle nezinto zokondlula ibhedi kwaye kukho iitawuli ezininzi elunxwemeni. Kukho ii-donas zasehlotyeni nasebusika, iingubo ezongezelelekileyo kunye nokufudumeza nokupholisa (A/C kunye neefeni zesilingi). Kukho i-TV kunye ne-DVD player kodwa ayikho i-wifi.
Ifanele abantwana kunye ne-portacot, isitulo esiphakamileyo, ibhafu, iithoyi, iincwadi kunye nemidlalo kunye neendawo ezikhuselekileyo zangaphandle.
Zilungele izilwanyana zasekhaya/izinja ezinezitya, izikhokhelo ezingasetyenziswayo, ukutya, izinto zokuhombisa ezindala kunye nomqamelo omkhulu ophantsi kunye neendawo ezimbini ezikhuselekileyo zangaphandle.
Ibhokisi etshixekayo ikuvumela ukuba ungene/uphume nanini na kwaye ndifumaneka efowunini nanini na xa uhleli. Ungonqeni ukufowuna okanye ukuthumela umyalezo ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
Ukuba uhlala iveki nangaphezulu kwaye ungathanda ukuhlala ixesha elide ndicela undazise kwaye ndiyakwazi ukuyilungisa ($ 40 ngeyure).
Ibhokisi etshixekayo ikuvumela ukuba ungene/uphume nanini na kwaye ndifumaneka efowunini nanini na xa uhleli. Ungonqeni ukufowuna okanye ukuthumela umyalezo ukuba unayo nayiphi na…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Barwon Heads